Q Bungalows - Double Deluxe Bungalows - I-Airbnb
Q Bungalows - Double Deluxe Bungalows
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Lionel
Itholakala e-Kep, eningizimu ye-Cambodia, i-Q Bungalows inikeza indawo yokuhlala engu-10 ebekwe engadini enhle engamahektha angu-8 ebheke eGulf of Thailand.
I-Double Bungalows yethu ingahlalisa abantu abangafika kwabangu-2. I-bungalow engu-26m2 inombhede ophindwe kabili futhi ifakwe ngokuphelele.
Ikamelo lokulala eline-air conditioning, i-TV nesiqandisi livula kuvulandi omkhulu onefenisha yangaphandle ukuze ukhululeke. Umbono ubheke ingadi enhle evundile, ichibi lokubhukuda lamanzi olwandle noma ulwandle.
Q Bungalows iyindawo ekahle ukuze uphumule, ukujabulela ukuphila futhi ukuxhumana nemvelo ... Ngempela, Q Bungalows lizungezwe okukhazimulayo 8 engadini ehektheleni futhi isendaweni emaphethelweni Kep National Park ... ngakho eduze kuleli paki, ukuthi ngokoqobo ube nombono wokuba wedwa emhlabeni! Ukusuka endaweni yokungcebeleka, izivakashi nazo zijabulela ukubuka okuhle kwe-Kep Bay.
Ukuthula kuyigugu. Ama-bungalows ayi-10 asatshalaliswa kuyo yonke indawo enezitshalo eziminyene kodwa ezilawulwayo, okuqhubeka nokugcizelela lo mbono wokuzihlukanisa nokuba yingxenye ebalulekile yemvelo.
Akukona nje kuphela ukuthi ingadi evundile inikeza izinhlobonhlobo zezihlahla nezimbali, futhi inikeza amakhambi amasha nezinye izithako zokupheka, kuhlanganise nopelepele odumile we-Kampot. I-Q Bungalows inendawo yayo yokutshala upelepele ophilayo futhi izivakashi zinganambitha lesi sinongo esihlwabusayo ezitsheni ezihlukahlukene ezilungiswe nguChef.
I-Q Bungalows inechibi elikhulu lokubhukuda lamanzi olwandle, lapho izihambeli zingaphumuza khona ngemva kosuku lokuzidela endaweni yase-Kep.
Ukuqinisekisa ukuthi izihambeli zithola indawo engcono kakhulu yokuhlala e-Kep nasezindaweni ezizungezile, abanikazi nabasebenzi be-Q Bungalows bakhona ukuze bahlangabezane nezicelo ezinzima kakhulu. Bangakwazi ukuhlela imisebenzi eyahlukene esifundeni njengesithuthuthu, ibhayisikili, i-tuk tuk noma uhambo lwesikebhe e-Kep Bay ukuze bathole ukunotha kwezilwane zasolwandle zasendaweni. Bangakwazi futhi ukunakekela ukudluliselwa endaweni elandelayo yabahambi.
ubusuku obungu-7 e- Kep Province
etholakala ku-400m ukusuka emakethe yezinkalankala, 900m ukusuka ogwini futhi ithinta ipaki kazwelonke